iPhone: Votsotra na tsy eo ny safidy 'Avelao ity resaka ity'? Ity ny vahaolana! - Hafa
mandehana mankany amin'ny iphone voicemail
tsy afaka miditra amin'ny fivarotana fampiharana amin'ny iphone
ipad tsy mifandray amin'ny tsy misy tariby
ahoana no hataonao fanitarana amin'ny telefaona
ahoana no hanesorako ny passcode amin'ny iphone-ko
iPhone: Votsotra na tsy eo ny safidy 'Avelao ity resaka ity'? Ity ny vahaolana!
Ao anaty hafatra an-tsoratra vondrona na resaka iMessage ianao ary te hivoaka. Tianao ny namanao, fa manimba ny iPhone-nao ary ampy izay. Mikasika ianao Information Ao amin'ny zoro ambony ambony amin'ny rindrambaiko Messages dia mihodina ianao ary mahatsikaritra fa ilay ' Avelao io resaka io 'tsy maizina na tsy eo . Anatin'ity lahatsoratra ity dia hazavaiko ny fomba fiasan'ny Leave this resaka, ny antony tsy maha-misy azy na ny volondohany, ary ny fomba hivoahana vondrona SMS na resaka iMessage amin'ny iPhone-nao.
Nanana hafatra an-tariby nandritra ny taona maro izahay, saingy Avelao ity resaka ity dia natomboka vao tsy ela akory izay. Ny antony dia Avelao ity resaka ity mihatra amin'ny Resaka iMessage , izay iMessages eo anelanelan'ny olona roa.
Raha manontany tena ianao hoe aiza no jerena Avelao ity resaka ity , sokafy ny fampiharana Messages, sokafy izay hafatra vondrona, paompy vaovao eo amin'ny zorony ambony havanana ary ahodino.
iphone 6s triatra fanoloana efijery
Messages Text Group vs. Resaka iMessage
Hatramin'ny vao tsy ela akory izay, ny “fandefasan-kafatra vondrona” nandraisanay anjara dia nampiasa ny drafitra fandefasan-kafatra izay novidianay tamin'ny alàlan'ny mpamatsy tolotra Wireless anay handefasana sy handefasana hafatra. Nampiditra Apple vao tsy ela akory izay Resaka iMessage , izay ireo hafatra vondrona izay mampiasa ny haitao iMessage an'i Apple fa tsy ny drafitra fandefasan-kafatrao.
Zahao ny lahatsoratro ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny iMessages sy ny hafatra an-tsoratra raha te hahafantatra ianao hoe maninona no zava-dehibe ny fampiasana iMessage ho an'ny fandefasana hafatra amin'ny tarika.
Fa maninona no mbola tsy nisy ny bokotra 'Avelao ity resaka ity'?
Mba hahatakarana ny antony Avelao ity resaka ity dia endri-javatra vaovao, zava-dehibe ny fahafantarana voalohany ny fahasamihafana ifotony misy eo amin'ny hafatra an-tariby sy resaka iMessage.
Fandefasana hafatra an-tariby
Miaraka amin'ny fandefasan-tsoratra amin'ny tarika dia mandefa hafatra ny olona tsirairay mivantana ny olon-drehetra ao amin'ny vondrona, ary Ny olona tsirairay an'ny iPhone dia manara-maso ireo mpandray anjara amin'ilay resaka .
Miaraka amin'ny resaka iMessage, ny mpizara iMessage dia miasa ho mpanelanelana amin'ireo mpandray anjara rehetra. Raha tokony hampiasa ny tamba-jotra finday ianao dia mandeha amin'ny alàlan'ny mpizara iMessage ny hafatra rehetra ny mpizara dia manara-maso ireo mpandray anjara amin'ilay resaka .
ny fomba fampifandraisana sciphone amin'ny internet
midika hoe hala mikisaka aminao
Ahoana no ahafantaranao raha ao anaty hafatra an-tsoratra vondrona na resaka iMessage ianao
Sokafy ny fampiharana Messages, paompy hanokafana ny hafatry ny vondrona, ary jereo eo ambanin'ny famantaranandro eo an-tampon'ny efijery. Raha hitanao Vondrona MMS , ao amin'ny hafatra an-tsoratra mahazatra an'ny vondrona ianao. Raha hitanao vondrona , ao anaty resaka iMessage ianao.
Tsy manana fahaizana milaza aminao ny iPhone-nao mivantana amin'ny iPhone hafa tianao handao resaka, fa afaka tatero amin'ny mpizara iMessage an'i Apple. Koa satria ny mpizara iMessage dia manara-maso ireo mpandray anjara ao anaty vondrona, ny olona tsirairay dia afaka mamela ny resadresaka matetika. Raha ny safidy an'ny Avelao ity resaka ity banga na volondavenona, vakio hatrany raha te hahalala ny antony.
Fa maninona aho no tsy mahita safidy hiala amin'ny resaka?
Raha tsy hitanao ny bokotra Avelao ny resaka , ao anaty hafatra an-tsoratra nentim-paharazana ianao fa tsy resaka iMessage. Ny fandefasana hafatra an-tariby dia mampiasa ny drafi-pandefasan'ny mpanome tolotra tsy misy tariby anao, ary satria tsy afaka milaza aminao ny iPhones mivantana amin'ny iPhones hafa tianao handao resaka, ny fialana dia tsy safidy.
Ahoana no fomba hamelako hafatra SMS nentim-paharazana?
Mety ho trite ity, saingy ny marina: mangataha am-panajana mba tsy hisy hafatra halefa aminao intsony, na hanakana nomerao. Tsy voafehinao intsony ny hoe mandray hafatra an-tariby misy vondrona noho ny fotoana handefasana hafatra an-tsoratra mahazatra. Raha tena leo ianao, ny lahatsoratro momba ny fomba fanakanana ireo miantso amin'ny iPhone miasa amin'ny fandefasana hafatra ihany koa izy io.
Raha volondavenona ny safidy Avelao ity resaka ity
Raha ny safidy an'ny Avelao ity resaka ity milamina amin'ny iPhone-nao, midika izany fa telo fotsiny ny mpandray anjara amin'ny resaka iMessage ary tsy afaka miala ianao Tsy afaka mamadika resaka iMessage olona telo ho iMessage olona roa ianao.
Na dia hofafanao amin'ny iPhone aza ny resaka iray manontolo, dia ho ampiarina amin'ny vondrona indray izany amin'ny manaraka raha misy mandefa hafatra. ny ihany fomba iray handao resaka iMessage olona telo dia ny manampy olon-kafa ao amin'ilay vondrona mba hanao azy io ho olona efatra - dia afaka miala ianao.
vitsika mainty amin'ny dikan'ny trano
Fa maninona no tsy avelako ny resaka iMessage olona telo?
Miareta amiko: teorika, raha miala amin'ny resaka ianao dia roa fotsiny ny mpandray anjara ary tsy ho resaka vondrona iMessage intsony izany. Fa kosa, mety ho iMessage mahazatra eo anelanelan'ny olona roa.
Toa endri-javatra io izay tokony ho nampidirina teo anilan'ny resaka iMessage, saingy tsy nanao izany. Ny mpandrindra Apple dia tsy isalasalana fa miasa amin'ity fampiasa ity ankehitriny ary hamoaka azy io ho ampahany amin'ny fanavaozana ny iOS ho avy.
Rahoviana mety l mamela resaka?
Avelao ity resaka ity Tsy mandeha izany raha tsy amin'ny resaka iMessage miaraka amina mpandray anjara efatra na mihoatra ianao.
Avelao ity lahatsoratra ity
Avelao ity resaka ity endri-javatra tsara io izay mbola tsy matotra tanteraka, ary antoka manahirana raha tsy azonao ny fomba sy ny fotoana mety. Aza misalasala mizara ny eritreritrao ao amin'ilay faritra maneho hevitra etsy ambany, ary raha manana fanontaniana hafa ianao, Vondrona Facebook Payette Forward toerana tsara ahazoana fanampiana.